Ukugcinwa kweTeleskopu | Ngeentlanzi
Ukunyamekelwa kwentlanzi yeTeleskopu
URosa Sanchez | | Amanzi abandayo e-aquarium
El Intlanzi yeteleskopu Ngumzekelo owahlulwe ngaphandle kwamathandabuzo nguwo Amehlo amakhulu athe nca emacaleni ziyalingana kwaye zihlala zimnyama. Le ntlanzi yeyosapho lweCarasius auratus kwaye ikwabizwa ngokuba yintlanzi emnyama. Yintlanzi engafuni nkathalo ikhethekileyo kwaye ithandwa kakhulu kwiindawo zasemanzini ngenxa yomtsalane wayo.
Yiyo iintlanzi ezizolileyo nezinoxolo kwaye nangona kukho iintlobo ezahlukileyo zemibala, kuba yayixhomekeke ekuzaleni okuphucukileyo kakhulu, ezinye iisampulu ezikumgangatho ophezulu zinombala ongqongqo nangona ezona zidumileyo zimnyama. Phakathi kweentlobo ezahlukeneyo kwaye kwaziwa ngoku: iintlanzi zasemazulwini, amehlo ebhabhu, idemekin, iliso lwenamba kunye nentloko yengonyama.
Xa isiza intlanzi yamanzi abandayo olona nyango lukhethekileyo oluneentlobo zamanzi ashushu alufuneki. Ayinayo i-heater yokugcina iqondo lobushushu lizinzile ngeqondo lobushushu elingaphaya kwe-24ºC, zihlala ngokugqibeleleyo nangona kuyacetyiswa ukuba zingatshintshi ngequbuliso kubushushu kuba zinokufa.
Yintlanzi kabani ubuntununtunu buchanekile emehlweni kwaye basesichengeni sokubambisa ukungundaKe, ulondolozo lwe-aquarium yeyona nto ibalulekileyo yokuzigcina zisempilweni. Lo mzuzu ubonakala umile kwaye ungenawo amandla, kufuneka ubonwe kuba kusenokwenzeka ukuba uyagula. Kufuneka kukhunjulwe ukuba njengoko intlanzi ikhula kwaye iba nkulu, ukulahleka kombono kuya kusiba nzima.
Ngokubhekisele kwisihluzo se-aquarium ayinakuba namandla kakhulu, kuba iintlanzi zeteleskopu zilinganiselwe kakhulu ekudadeni kwaye zinokuphela zitsalwa kwaye zibangele uxinzelelo. Akukwacetyiswa ukuba nezinto zokuhombisa ezinokubangela umonakalo, umbono wakho olinganiselweyo unokwenza ungqubane nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Ukunyamekelwa kwentlanzi yeTeleskopu
Uyijonga njani intlanzi yamadoda, eyethokazi yesibonakude yentlanzi?
Ukutsala amehlo, ukhathalelo olulula lwentlanzi